Godinlabe oo laga dareemayo Mashquul farabadan oo ku aadan Munaasabada Ciida | goboladaradio.com	Friday, February 24th, 2017	Home
Published on October 27, 2012 by admin · 13 Comments (Oct 27, 2012 Goboladaradio) Iyadoo Maanta ay ku beegan tahay Maalintii labaad ee Munaasabada barakeysan ee Ciidul Adxaa waxa guud ahaan mashquul farabadan laga dareemayaa Degmooyinka iyo Deegaanada hoosyimaada Maamulka Ximan iyo Xeeb.
Degmada Godinlabe waxay ka mid tahay goobaha mashquulka farahabadan laga dareemayo iyadoona wadooyinka lagu arkayo dhalin yaro badan oo raxan raxan u socda islamarkaan u dabaal degaya Munaasabada Ciida.
Sidoo kale caruur da’yar ooo ku ciyaaraya waxyaabaha ay caruurtu ku ciyaarto maalmaha farxada oo wadooyinka orod ku maraya ayaa lagu arkayaa Magaalada.
Haka reebin waalidiinta ayaa iyagoo caruur yar yar gacmaha ka wada oo si qurxoon u libisan waxay qaraabo salaan ugu tegayaan xaafadaha kala duwan ee Degmada Godinlabe.
Xulka wararka Soomaaliya